musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vatambi veBrazil Vanotamba UGabriel Barbosa Nyaya Dzechidiki uyezve Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti genius nezita rezita "Gabigol". Yedu Gabriel Barbosa Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekusimuka kwaGabriel Barbosa. Mifananidzo Credits: Instagram uye DailyMail.
Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yehupenyu, hupenyu hwehupenyu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva nezve yake chinangwa-chikoro mafomu uye hunyanzvi hunyanzvi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveGabriel Barbosa's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Gabriel Barbosa Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Pamberi mutambi Gabriel Barbosa Almeida akaberekwa pazuva re30th raAugust 1996, kudhorobha reSão Bernardo do Campo, panobuda São Paulo muBrazil. Ndiye wekutanga pavana vaviri akazvarwa kuna amai vake, Lindalva Barbosa uye kuna baba vake, Valdemir Barbosa. Tarira, mufananidzo wevabereki vaGabriel Barbosa panguva yekubatana kwavo.
Gabriel Barbosa mubereki Valdemir naLindalva. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Anoshamisira wenhabvu weBrazillian nyika yemunyika nemidzi yemhuri yechiPutukezi akakurira mune yepakati mhuri yepamberi kurongedza pamuvakidzani weMontanhão, mudunhu rake rekuzvarwa kwaakakurira pamwe chete nehanzvadzi yake diki, Dhiovanna Barbosa.
Kukura muMontanhão mudiki Gabriel aive neechikara anoda zvebhora iro raipotsa rashatiswa nemhirizhonga inoitika nguva dzose kumuvakidzani. Kusagadzikana dzimwe nguva kwaive kwakanyanya zvekuti nyonganiso yepfuti yepedyo yaiwanzotumira iye mukomana mudiki nevabereki vake vachipomba kuchengetedza pasi pematafura nesofa.
Gabriel mudiki aive neechidiki anoda bhora achiri kukura paigara Montanhão. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Gabriel Barbosa Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Ipo pese paive pasina Gabriel patafura kana sofa aitoenda kumigwagwa kunotamba nhabvu sevazhinji vezera rake. Atsigirwa nerutsigiro rwerudo rwemhuri yake, Gabriel akatanga kudzidziswa pamitambo yepasirose yenhabvu inonzi Futsal. Hazvina kutora nguva refu iye panguva iyoyo 8- gore rekutanga rikatanga kuita mumakwikwi ehutsi mafambi eguni rechikwata chake chekumusha - Sao Paulo.
Pazuva rakanakidza mutambo neSantos, Gabriel airatidza hunyanzvi hwakashamisa ngano yaSanto Zito. Saka Gabriel akadaidzwa Join the young mifumo yeSanto FC kwaaizoshandisa chikamu chiri nani chebasa rake repakutanga achitamba parutivi neshamwari yake yepedyo. Neymar Jr.
Mufananidzo usingawanzove wechidiki Gabriel Barbosa naNeymar Jr panguva yavo yehudiki manhabvu kuSantos FC. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Gabriel Barbosa Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Paaive paSantos, Gabriel akapenya paakasimuka kuburikidza nevechidiki veClub nzvimbo. Pakasvika nguva yekuti Gabriel asvike makore ake masere nemakirabhu, aive nerevo inokatyamadza yeisingasviki pane 600 zvinangwa uye kuverenga. Chimiro chinoshamisa chakadai chakawana Gabriel zita rekuti "Gabigol" uye chakamuchengetedza nzvimbo padivi reBrazil.
Mushure mekunyanya kufarira chikwereti chaGabriel, uyo aimbove murairidzi weSantos, Muricy Ramalho akakoka Gabriel kuti atange kudzidzira nemukuru weclub. Santos FC yakaenderera mberi nekusungira Gabriel pasi neyakagara kwenguva refu yeU $ 50million uye vakamutarisa nemufaro vachimuchengeta fomu mushure mekuita kudhinda kwake kunge 16-gore.
Gabriel Barbosa akange aine makore 16 apo Santos akamupa kondirakiti yake yekutanga mu2013. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Gabriel Barbosa Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
2016 yaive musanganiswa weakanaka uye akaipa mutambo wemitambo gore raGabriel. Kutanga nezvakanaka, akawana kudanwa kunobatana neBrazil Olimpiki timu yeRio 2016 uye akabatsira iwo ari pasi-23 parutivi kuhwina menduru yegoridhe kekutanga munhoroondo yavo. Kutevera Mitambo yeOlympic, Gabriel akawana kuchengetwa kuenda kuIntern Milan kwaakanetsekana kuwana mukana wake.
Achibvumirana nehurombo raGabriel rekutadza, Inter Milan akamukweretesa kuBenfica uko kunetsana kwake kwaenderera. Pakusvika kukuru kwaGabriel kushungurudzika muItari, vateveri nemutori venhau vakanaya zvisinga tsoropodzi paari nekumwe kutaura kuti anga atoremara uye kusakodzera zita rake rekuti "Gabigol" iro rakamirira Prolific chinangwa kurova.
Gabriel Barbosa kutadza kufadza kuIntern Milan naBenfica kwakamuita kuti anzwe kushoma mutambi nepo vazhinji vaitaridza kuti akange ave kufutisa. Image Chikwereti: FourFourTwo.
Gabriel Barbosa Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Gabriel akazopedzisira akweretwa kuchikwata chake chehudiki Santos kwaakazvidzikunura nekuva mutambi wepamusoro mu 2018 / 2019 edition yeBrasileirão ine 18 zvinangwa. "Imba inotapira pamba" Gabriel aigaro ridza mhere sezvo asinganzwisise mafambiro aakaita mojo.
Gabriel Barbosa akazvidzikunura paSantos FC aine fomu yakawedzera-yekukora zvibodzwa iro rakavhara vaimutsoropodza. Mifananidzo Credits: Youtube.
Iko kumberi kuri panguva yekunyora, kutamba nechikwereti cheFlamengo FC uko kwagara kune 34 zvinangwa mukuwonekwa kwe40! Chiizve? Gabriel akaratidzira zvido zvekutamba kuPremier League kudivi Liverpool FC. Kunyangwe paine zvikamu gumi zvekusagadzikana zvakapoteredzwa kufamba kwakarongwa, chero divi renhabvu Gabriel anozviwana angave nhoroondo.
Gabriel Barbosa Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi - Relationship Life Facts
Kure kure nekubatikana kwaGabriel zvemitambo, ane hupenyu hwerudo hwainakidza hwamuona achizivikanwa pamwe neropa reropa raNeymar - Rafaella Santos. Iko kumberi hakuzivikanwe kuve nemusikana musikana paruzhinji asati atanga kufambidzana naRafaella mu2017.
Vakadanana kwemwedzi mishoma vasati vaenda kunzira dzakasiyana asi vakadzoreredza marimi ekare muna Kubvumbi 2019. Hapana imwe yeshiri dzerudo ine mwanakomana kana mwanasikana kunze kwemuchato asi mafani ehukama hwavo anotarisira kuti iyo duo inotora zvinhu kune inotevera nhanho nekuita muchato nekukurumidza.
Gabriel Barbosa ari kudanana nemusikana waNeymar Jr Rafaella Santos. Mufananidzo Chikwereti: TheSun.
Gabriel Barbosa Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Zvinotora mhuri kuvaka yakawedzera kurohwa saGabriel. Tinokuunzira chokwadi cheupenyu hwemhuri yaGabriel kutanga nevabereki vake.
NezvaGabriel Barbosa baba naamai: Lindalva & Valdemir Barbosa ndivo amai vaGabriel na baba vake zvichiteerana. Vabereki vanobva mumhuri diki vanobva vaunza Gabriel kunhabvu achiri mudiki uye dzimwe nguva aikwereta mari yekugonesa mutambi kuenda kunodzidziswa nhabvu. Ivo vanodada nezvaGabriel ava uye vanowanzo ratidza mifananidzo yehupenyu hwepakutanga pane yavo midhiya inobata kuti ataure nyaya yake.
Rare Childhood Mifananidzo yaGabriel Barbosa nevabereki vake. Mifananidzo Credits: Instagram.
Nezvevakoma vaGabriel Barbosa: Gabriel haana munun'una asi hanzvadzi diki inozivikanwa saDhiovanna Barbosa. Dhiovanna muenzaniso we Instagram ane zvido zvekudzidza mitauro yekune dzimwe nyika. Ari pedyo zvakanyanya nemukoma wake Gabriel kuti akawana tattoo yekumuyeuchidza kuti anogara ari padyo kunyangwe achifamba sei kupota nyika.
Gabriel Barbosa pamwe nehanzvadzi yake. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Pamusoro pehama dzaGabriel Barbosa: Panyaya yemadzitateguru aGabriel Barbosa uye hupenyu hwakareba hwemhuri, zvishoma zvinozivikanwa pamusoro pasekuru nasekuru vake nasekuru vake vasati vazivikanwa panguva yekunyora. Zvimwechetezvo, hapana zvinyorwa zvemutambi wemurume wake, babamunini uye hama dzake iye achinge asina hama kana nisi panguva yekunyora.
Gabriel Barbosa Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi - Personal Life Facts
Hunhu hunhu hunotsanangura Gabriel Barbosa ndehweVirgo Zodiac chiratidzo. Izvi zvinosanganisira kugona kwake kwenyasha, kuwirirana, kukwikwidza uye kugona. Uyezve, Gabriel ane munhu anokanganisa kuita zvinhu uye anoratidza zvine mwero zvinhu zvine chekuita nehupenyu hwake hwakavanzika.
Taura nezve izvo zvinodakadza naGabriel zvekufadza ane zvakawanda zvinoverengeka zvezviitiko zvekunakidza izvo zvinosanganisira kuteerera mimhanzi, kuimba, kushambira, kushanyira mahombekombe akanaka uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Gabriel Barbosa anoda kushambira uye kupedza nguva kuBeach. Mifananidzo Credits: Instagram.
Gabriel Barbosa Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi - Lifestyle Facts
Kunyangwe Gabriel Barbosa aine mutengo wemusika wemamiriyoni eUS $ 23.00 panguva yekunyora, mari yake yemubhadharo haisati ichizivikanwa nekuda kwekuti anotambira mari shoma nemubhadharo sepamusi waDecember 2019.
Nekuda kweizvozvo, Gabriel haawanzo kurarama hupenyu hwoumbozha hwevatambi vane ruzivo vane dzimba dzinodhura uye vanofamba nemotokari dzekunze. Nekudaro, ane motokari yakanaka kwazvo inogona kushandurwa uye inoziva mashandisiro ekuzorora kunzvimbo dzinodhura kutenderera kuzere nyika.
Gabriel Barbosa achifambisa mumotokari yake yakanaka inotendeuka. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Gabriel Barbosa Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Kuputira nyaya yedu yeGabriel Barbosa yehucheche uye biography pano pane zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga tsanangurike chokwadi chakasanganiswa mune yake bio.
Kusvuta uye Kunwa: Gabriel Barbosa haana kupihwa kuputa, kana kuwanikwa achifararira. Mutambi wacho anotarisa pane kuve nehutano hwakanaka mundangariro nemuviri sezvo achigadzirira kutora chinonetsa chinotungamira nhabvu nhabvu inopa.
Tattoos: Pamwe ari mumwe wevanonyanyo tenderedzwa mubhola munhoroondo yemitambo, Gabriel ane hunyanzvi hwemuviri kumusana kwake, maoko, makumbo nemutsipa. Anonyanya kukosha pakati pematato aya mifananidzo yevabereki vake, hanzvadzi uye shumba ine manejara ane hutsi.
Maonero aGabriel Barbosa's torso tattoos. Mifananidzo Credits: Instagram.
Chitendero: Mutambi wacho anogona kunge asiri kutaura nezve chitendero asi maratidziro ake anoratidza mufananidzo waJesu anotaura huremu nezvehukama hwake mune zvechitendero, nekunetseka kuri mukutsigira chikatorike.
Unogona kuona mufananidzo waJesu kurudyi rwaGabriel Barbosa?
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu Gabriel Barbosa Childhood Story plus Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Bernardo Silva Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts